HD Tsoka Valve
Ture Union Bhora Valve
PVC Compact Bhora Valve
PVC Tarisa Valve
Otomatiki Sefa Chiteshi
Drippers Uye Sprinkler
Huru Pfuti Sprinklers
Mini Valve Uye Fittings
Hydraulic Kudzora Valve
Fetiraiza majekiseni Venturi
PVC LayFlat Hose Uye Fittings
Zvishandiso Uye Vamwe
MAFOTO MAVHALI anogadzirwa zvachose nezvinhu zvepurasitiki zvinoramba kwazvo uye zvinogara zviine simbi zvinhu, izvo zvinobvumidza kuona kuita kwakakwana mumarudzi ese emamiriro ekushanda. Zvese izvi pamwe nekuitwa mukugadzirwa kwayo uye modular polyvalence, inogadzira chinhu chakakosha mukugadzirwa kwenzvimbo dzayo.
Nzvimbo yeKutanga: Hebei, China
Zita Rekushandisa: Greenplains
Kushanda: General, Zvekurima Kudiridza
Usage: Mvura Kuchengetedza Irrigation System
Technology: Tekinoroji Yemvura
Saizi: 2 "- 4"
HD Yetsoka Valve -Mukadzi tambo 2 ″ -4 ″
HD Tsoka Valve -Socket 110-200
1.Kurumidza, kushanda zvakanaka, uye nehunyanzvi mhinduro mukati maawa makumi maviri nemana, maawa gumi nemana emasevhisi epamhepo.
2. Makore gumi ekuziva ruzivo mumunda wekurima.
3. Rutsigiro rwehunyanzvi uye mhinduro nemainjiniya mukuru.
4. Strict quality control system & timu, mukurumbira wakakwirira mumusika.
5. Yakazara huwandu hwezvinodiridza zvigadzirwa zvesarudzo.
6. OEM / ODM masevhisi.
7. Gamuchira mharidzo yekuenzanisira pamberi peMisa Order.
Pashure: PVC Tarisa Valve
Zvadaro: Sefa Y mhando-Screen
1. Iwe uri kambani yekugadzira kana yekutengesa?
Isu tinozivikanwa mugadziri wemadiridziro masisitimu munyika ane anopfuura makore gumi emabhizimusi ruzivo.
2. Unopa basa reOEM here?
Ehe. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neGreenPlains Brand. Isu tinopa iyo OEM sevhisi, ihwohwo mhando. Redu & D timu ichagadzira chigadzirwa maererano nezvinodiwa nevatengi.
3. chii MOQ yako?
Chigadzirwa chega chega chine MOQ dzakasiyana, Ndokumbira utaure nekutengesa
4. Ndeipi nzvimbo yekambani yako?
Inowanikwa muLangfang, HEBEI, CHINA. Zvinotora maawa maviri kubva kuTianjin kuenda kukambani yedu nemotokari.
5. Ungawana sei muenzaniso?
Isu tinokutumira iwe semuenzaniso yemahara uye yekutakura inounganidzwa.
Plastiki Tarisa Valve
Plastiki Tsoka Valve
PVC Imwe Tarisa Valve
Swing Tarisa Valve
Wafer Swing Tarisa Valve
GreenPlains hwakagadzwa muna 2009. semumwe wevanonyanya kudiridzira zvigadzirwa zvevanodiridza, vakazvipira kupa zvigadzirwa zvemadiridziro mhinduro kune vashandisi vepasirese, iri kutungamira indasitiri nehunhu hwepamusoro hwechigadzirwa uye mukurumbira wakanaka mumusika wepasi rese.
Bafang Viwanda Zone, Dacheng, Langfang Guta, Hebei Province, China
Isu tinoshandisa makuki kukwidziridza dhizaini yewebhusaiti yedu. Nekuenderera mberi nekushanya kwako pawebhusaiti, unobvumidza kushandiswa kwemakuki. [Ruzivo rwakawanda]Zvakanaka